အရုပ်၊အသံ ကြည်လင်ပြတ်သား ကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Arcsoft Webcam Companion - Software Guide
Home / pc software / အရုပ်၊အသံ ကြည်လင်ပြတ်သား ကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Arcsoft Webcam Companion
အရုပ်၊အသံ ကြည်လင်ပြတ်သား ကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Arcsoft Webcam Companion Reviewed by Ko Lin on 7:22:00 AM Rating: 5
အရုပ်၊အသံ ကြည်လင်ပြတ်သား ကောင်းမွန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Arcsoft Webcam Companion
Ko Lin 7:22:00 AM pc software
Arcsoft Webcam Companion 4.0.0.374 နောက်ဆုံးထွက် Update လေးပါ..။ Arcsoft Webcam Companion လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သုံးဖူးတဲ့ သူရှိသလို မသုံးဖူးတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါလေးကတော့ မိမိ ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ Webcam အရုပ်၊အသံ ကြည့် ရှုနိုင်ရုံတင်မက ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း, ဗီဒီယို record လုပ်နိုင်ခြင်း , ဓါတ်ပုံ ဒီဇိုင်း, HD နှင့် 3D ပုံရိပ်တွေ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း, စမတ် Precise အိမ်ပြန် ဗီဒီယို စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်း နိုင်ခြင်း, ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ နှင့် ဓါတ်ပုံ တွေကို အရွယ်အစား အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ခြင်း စ တာတွေကိုပါ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓါတ်ပုံ / ဗီဒီယိုတည်းဖြတ် tools တွေကို Youtube, Flickr, နှင့် Twitter ကိုတိုက်ရိုက် Share လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 82.61 MB ရှိပြီး Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 (32-bit or 64-bit) အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ အသုံးပြုလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများ အောက်မှာ ဒေါင်းလုဒ် ရယူနိုင်ပါပြီ။
Capture awesome HD and 3D images or videos with your webcam Easy-to-use and smart photo/video editing tools Share your artwork directly to YouTube, Flickr, and Twitter etc. Precise home video surveillance than ever.
Capture HD and 3D images or videos with your webcam ArcSoft WebCam Companion®4offersabroad range of applications designed and optimized to recordavideo or takeaspecial photo, lets you get the most out of any webcam. Now, HD and 3D mode are supported.
Have fun and get creative withamorphing tool to merge your face into another character, and then snapaphoto. Preview your pictures with the picture-in-picture feature, fit in view, portrait view, zoom in/out, and flip tools. Createatemplate by loading any picture and edit them withavariety of tools.